T itulo Eames DSW - khiphani zomhlaba uchungechunge edumile futhi edume akhiwa Abaklami American uCharles Ray Eames. Imodeli isibe ukuphindaphindwa ukuklanywa, wenza ngo-1948 futhi waba kwesitulo lokuqala ngokuphakeme ezimbonini ekhiqizwa salolu chungechunge. Ngemva nje kancane kwalokho, le model New York ukhishwa Museum of Modern Art. Eames DSW esihlalweni amashumi eminyaka ngoba Abahlobisi eziningi nabaqambi luhlala luwuhlamvu lunye yezihloko ozithandayo i ingaphakathi.
T itulo Eames: Incazelo
Ukuma ergonomic ka olubunjiwe esihlalweni plastic Eames DSW lemilenze sokhuni, ukusekela okuhle emuva izihlalo ayikajuli ukulingana kwenza ukusetshenziswa kwaso njengoba kwasemini ekamelweni lokudlela, ukusebenza ehhovisi, uhleli egumbini lokuphumula ngesitayela nokunikela yokudlela noma cafe, reception yehhovisi, noma ihhotela yokwamukela izivakashi . Made zokukhandleka ukumelana okusezingeni eliphezulu and plastic okuhlala, kokuba eside ekuphileni, steel nezinkuni.
Model waqaphela futhi yenza block inkomba, esakhiwa 4 izinyawo imithi intersecting metal izinduku eqondiswa phansi esihlalweni. Zonke izingxenye zenziwa ngokhuni okuqinile. Basuke kahle ngesandla kusetshenzwe, ukuhleleka kwayo, otpolirovyvayut okuthuthukisa olubushelelezi bente upende omnyama, okuyinto akunabo ubuthi futhi hypoallergenic izindlela obusetshenziswa embonini ifenisha.
Vikela bungalimazi ebusweni lugs nokunwebeka. Ukwakheka ezenziwe ngensimbi chromed nge powder enamathela ekhethekile, ngokwanele ukumelana umonakalo mechanical, imvelo amakhemikhali nolaka futhi lokushisa ukweqisa. Okunye okufanele undoubted we wobuciko elibuyiselwe "Ames" iyona kalula e ezihambayo, isitoreji kanye nokugcinwa.
Abaklami Modern futhi Abahlobisi ingaphakathi zihlanganisa lokhu ucezu omangalisayo ifenisha design ingaphakathi ezihlukahlukene izitayela, ezisukela eziphumulele isitayela classical kuya zobuchwepheshe. Ifomu elula ngesikhathi esifanayo sobuhle bayo ongavamile ukwenza u-Eames ungusihlalo Ukwakheka design isikhungo, ngokuphelele kuhlangene nezinye izingcezu ifenisha.
Amagama Ray Charles Ames esetshenziswa kuphela ukuchaza izici lezihlalo ekhiqizwa ngokuhambisana ukuklanywa, hhayi njengendlela lokuhweba.
Isihlalo kwesitulo wenziwe:
Plastics (PP polypropylene);
carbon fibre (Carbon Fibre);
Chair Eames: Izibuyekezo
Ngokusho impendulo yomsebenzisi, plastic esihlalweni olubunjiwe lemilenze lokhuni isebenziseka ngezindlela eziningi, okuhlala isikhathi eside ngokwanele ukumelana futhi imvelo. Made of high impahla, sisekhaya, futhi isihloko yobuciko. Imibala egqamile sihlanganise izihlalo ngokumangalisayo imilenze yokhuni engeza imfudumalo nenduduzo. Eames ungusihlalo e ngokuphelele yimuphi umbala bheka ngokuphelele emangalisa futhi uzokwazi ukuhlobisa isikhala elingaphakathi.
Manzi ibhulukwe Izingane ikakhulukazi. umehluko wemisindo nemiqondo yamagama Ukukhetha